लकडाउनको पिडा – बाँचौं, गाह्रो भो ! मरौं, छोरीहरू छन् ! (भिडियोसहित) – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/लकडाउनको पिडा – बाँचौं, गाह्रो भो ! मरौं, छोरीहरू छन् ! (भिडियोसहित)
लकडाउनको पिडा – बाँचौं, गाह्रो भो ! मरौं, छोरीहरू छन् ! (भिडियोसहित)
पार्वती श्रेष्ठ सीतापाइलाको टेम्पो ग्यारेजमा छिन् । २७ वटा टेम्पोको स्टेसन हो यो । बिहान झिसमिसेमै निस्कने टेम्पो झमक्क साँझ परेपछि मात्र यो स्टेसनमा आइपुग्थ्यो । रातभर चार्ज भएर बस्थ्यो । चैत ११ गते बिहानदेखि स्टेसनका यी टेम्पोहरू गेटबाहिर निस्किन पाएका छैनन् ।
तीन महिनायता नम्बर प्लेटसँगै पार्वतीको जीवन पनि धुमिलिएको छ । मैलिएको नम्बर प्लेट पुछ्दै गर्दा पार्वतीको तिख्खर स्वर सुनिन्छ, ‘बच्चाहरूले गर्दा मर्न पनि सकिँदैन । बाँचौं ! बाँच्न धेरै गाह्रो भइसक्यो ।’
लकडाउन सुरु भएपछि तीन महिनादेखि स्टेरिङको दर्शन गर्न नपाएको टेम्पोले पार्वतीलाई सपनामा आएर झस्काउँछ र निद्रा गायब गराइदिन्छ।
लकडाउनले पार्वतीलाई फेरि उस्तै निराश बनाएको छ । उनी भन्छिन्, ‘अहिलेसम्म त जसो-तसो बाँचियो । अब त बाँच्नै गाह्रो छ ।’
लकडाउनका कारण पाँच लाख बढी ऋणमा परिसकेकी छन् । किस्ताका लागि बैङ्क र सहकारीबाट तारम्तार फोन आउँछ । पार्वतीले फर्काउने जवाफ नै भेट्टाउँदिनन् ।
केही दिनअघि छोरीको स्कुलबाट किताब लिनका लागि फोन आयो । स्कुलले अनलाइन कक्षा सुरु गरेको थियो । स्कुल पुगेपछि शिक्षकले भने, ‘भर्ना गरेपछि मात्र किताब उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।’
जेठीका लागि २२ सय र कान्छीलाई १६ सय रुपैयाँ अब कहाँबाट ल्याउने ? पार्वती भन्छिन्, ‘बरु एक वर्षपछि पढ्लान भनेर किताब नै नलिई फर्किएँ ।’
तीन महिना टेम्पो नचल्दा किस्ता तिर्न बाँकी ब्याट्री पनि बिगि्रसकेको छ । पावर्तीको जिन्दगी फेरि विषम परिस्थितिमाथि उभिएको छ ।